Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Than Lyin Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Than Lyin
Thanlyin mission at the beginning of the year 1173 (AD 629) passed the Thanlyin defeated King Ahraindayaza took the throne Thanlyin (b) was established in the village. Thanlyin reference Thanlyin called, according to the report Mon, called Thanlyin (Sale) Portuguese and translated into Portuguese (barium) (Syriam) which are historical. And two Thanlyin Dynasty (36), there are historical. Wealth rulers ceased crown after die. British residents in 1852 were included in Yangon.
On April 1, 1909, residents fog on 12 April 1912, designating the device early Thanlyin state advertising. Ward (Ward 4), and the urban population (10905) has been made now, Ward (Ward 17) Village (28) (57) expanding the villages on its way. (2019) in the urban population, (81467) The rural population in Latvia, (158968) The township's population was increased (up to 240435). Thanlyin includes Yangon also be planted in the southern suburbs. Thanlyin north latitude 16 degrees, 40 minutes and 59 minutes, East longitude and 96 degrees 13 minutes 25 minutes between Focus Praise square miles of the city at the township area (143.982) in the urban areas (5.92).
Praise on the city's east Thone khwe Tomatoes, Reefs bordering the city and the south. In the west, north of Yangon and Bago bordering the river. After Thanlyin can walk past the ship in two Bago River Bridge (1993) Praise - Yangon Dagon, and (in 2005) - the bridge, the construction of the bridge left Yangon contact side. Thone khwa Tomatoes, The city, Internet City, You can walk up to the city of Pegu and reefs. GRACEFUL residents of historic Kyaik Pagoda can be seen illuminated. Kyaik north, near the line of campus Natshinnaung Minister in the caves Padethayaza Mausoleum. (Built in 1750) in the city of Portugal can be found in the Christian church. Kyaik chamber is double-edged city on the sea surface height of land (78.396 points), erected by the Myanmar side, Street, Can also be seen along the Yangon River to pay homage.
Praise the rise in the city's education system Thanlyin B.E.H.S Schools, Thanlyin B.E.M.S (a) schools, Thanlyin B.E.P.S Schools, The monastic schools, In addition toaprivate high school in eastern Yangon University (assignment), Co-operative University, Technology (Praise) Myanmar Maritime University has opened up and was educated.Thanlyin agriculture, Agriculture, agriculture and gardening work, but since the days of Konbaung found in the history of the port city.
(In 1852) after the British conquered Burma Thanlyin the establishment ofapetroleum refinery. (1990), Thilawa (domestic) Industrial Zone is established. Foreign ships / Rangoon, to travel to and export Since established in the Thilawa port in order to be transported easily imports Thilawa special economic zone (a) and (b). Improve transportation, railway A new road construction, He served and recycled old. With the soaring development Thanlyin luxury hotels, Advanced Morocco, Higher housing, Cinemas, etc. have begun.
Thanlyin People, Township clinics, (24) hours have also specialized hospitals, diagnostic laboratories. In addition, support teams, NGO groups, Other organizations, teams, Many charity Shelter. Due to the city's development, the increase in urban population, buy / sell industries Company Divisions Private banks, Product showroom City Phayar Gyi market prices, as well as Super Market also began opening.
Getting better transport of residents,aman claiming to be from the deep Status Rising commodity transactions, and increase employment opportunities. Natural gas (CNG) for shops and private vehicles Filling Stations opened. Praise is the main port in the past now, bricks sand, Trading firms are crowded with rocks.
Thanlyin historic pagodas, Ancient buildings, There are members of Raza transport pilgrims Guests The dealers and agencies located in the city is the year (February) arrives Praise Kyaik not have learned that the feast is celebrated wedding.
သန်လျင်မြို့သည် သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၁၇၃ (အေဒီ ၆၂၉) တွင် ငသံလျင် သည် ပါဒဘုရင်Ahraindayazaမင်းအား လုပ်ကြံအောင်မြင်၍ ပါဒထီးနန်းကိုရပြီး သံလျင်(ခ)စကားရွာကို မြို့ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သံလျင်မင်းကို အစွဲပြု၍ သန်လျင်မြို့ ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြကြောင်း၊ မွန်အခေါ် သန်လျင်မြို့ကို (ထရောင်း) ဟုခေါ်ပြီး၊ ပေါ်တူဂီဘာသာ မှ အဂီဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် (ဆီရီယမ်)(Syriam) ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းများမှာ သိရသည်။ ပါဒ နှင့် သန်လျင်မြို့နှစ်ရပ်ပေါင်း မင်းဆက်ပေါင်း (၃၆)ဆက်ရှိသည်ဟု သမိုင်းများမှာသိရသည်။ ဘောဂသေနမင်းနတ်ရွာစံပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နန်းလျာမင်းဆက်ပြတ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် သန်လျင်မြို့နယ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
သန်လျင်မြို့နယ်သည် ၁၉၀၉ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် မြူနီစီပါယ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ၁၉၁၂ ဧပြီလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် သန်လျင်မြို့ကို နိုင်ငံတော် မှ ကြော်ငြာခဲ့သည်။ကနဦးအစောပိုင်းတွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း (၄) ရပ်ကွက်နှင့် မြို့ပေါ်နေ လူဦးရေ မှာ (၁၀၉၀၅) ဦးရှိခဲ့သော်လည်း ယခုတွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း (၁၇) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၈)၊ ကျေးရွာပေါင်း (၅၇) အထိ တိုးချဲလာနေပြီဖြစ်သည်။ (၂၀၁၉) ခုနှစ်တွင် မြို့နေလူဦးရေမှာ (၈၁၄၆၇)၊ ကျေးလတ်နေလူဦးရေမှာ (၁၅၈၉၆၈)၊ မြို့နယ်နေလူဦးရေပေါင်း (၂၄၀၄၃၅) အထိ လူနေမူများ ပြားလာခဲ့သည်။ သန်လျင်မြို့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပါဝင်ပြီး တောင်ပိုင်း ခရိုင်များ စိုက်ရောက်ရာ မြို့နယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ သန်လျင်မြို့သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ် နှင့် ၅၉ မိနစ်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ် နှင့် ၂၅ မိနစ် အကြားတွင်တည်ပြီး၊ သန်လျင်မြို့၏ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်းမြို့နယ်ဧရိယာမှာ(၁၄၃.၉၈၂) ဖြစ်ပြီး မြို့ပေါ်ဧရိယာမှာ (၅.၉၂) ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
သန်လျင်မြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် သုံးခွမြို့၊ ခရမ်းမြို့၊ တောင်ဘက်တွင် ကျောက်တန်းမြို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ရန်ကုန်မြစ် နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ပဲခူးမြစ်တို့ ဖြင့် ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ သန်လျင်မြို့ကို ယခင်က သင်္ဘောဖြစ်သာသွားလာနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးမြစ်ကူးတံတားနှစ်စီးကို (၁၉၉၃) ခုနှစ်တွင် သန်လျင်-ရန်ကုန်တံတား နှင့် (၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင် ဒဂုံ-ကုလားဝဲတံတားတို့ကို တည်ဆောက် ပြီး ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းသို့ ဆက်သွယ်ထားသည်။ သုံးခွမြို့၊ ခရမ်းမြို့၊ ကဝမြို့၊ သနက်ပင်မြို့၊ ပဲခူးမြို့ နှင့် ကျောက်တန်း မြို့တို့အထိ သွားလာနိုင်သည်။
သန်လျင်မြို့နယ်၏ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်သော သမိုင်းဝင်ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ခေါက်စေတီတော် ကြီးကို ဖူးမြော်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျိုက်ခေါက်စေတီ၏ မြောက်ဘက်စောင်းတန်း အနီး တွင် နတ်သျှင်နောင်ဂူ ဘုရား ၊ ဘုရားဝန်းထဲတွင် ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာဂူဗိမာန် ရှိသည်။ မြို့ဝင်တွင်လည်း (၁၇၅၀) ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့သော ပေါ်တူဂီခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျိုက်ခေါက်စေတီတော်သည် သန်လျင်မြို့ ၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမှတ် (၇၈.၃၉၆)ကုန်းအမြင့်တွင် တည်ထားသဖြင့် ရန်ကုန်ဘက် ခြမ်း မှ ဖြစ်စေ၊ ကုန်လမ်းဖြစ်စေ၊ ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှ ဖူးမြော်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သန်လျင်မြို့၏ ပညာရေးစနစ်မှာလည်း အ-ထ-က ကျောင်းများ၊ အ-လ-က (ခွဲ)ကျောင်းများ၊ အ-မ-က ကျောင်းများ၊ဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေးကျောင်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းများ ရှိသည့်အပြင် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် (တာဝ)၊ သမဝါယမတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) ၊မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်တို့ပါ ဖွင့်လှစ်ပြီး ပညာသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။
သန်လျင်မြို့သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတို့ကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော်လည်း ကုန်းဘောင်ခေတ်မင်းများလက်ထက်မှစ၍ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောင်ရာ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်ဟုသမိုင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ (၁၈၅၂) ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာပြည်အောင်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီး သန်လျင်မြို့တွင် ရေနံသန့်စင်စက်ရုံ ကို တည်ထောင် ခဲ့ကြသည်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်တွင် သီလဝါ (ပြည်တွင်း) စက်မူဇုန်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း သို့ နိုင်ငံခြားပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများ ဝင်/ထွက် သွားလာနိုင်ရေး နှင့် ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်များလွယ်ကူစွာ သယ်ယူနိုင်ရန် သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစက်မူဇုန် (က) နှင့် (ခ) ကိုလည်း တည်တောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် မီးရထားလမ်း၊ ကား လမ်း များအသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းဟောင်းများကို အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင်ချင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သန်လျင်မြို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည် နှင့် အမျှ အဆင့် မြင့်ဟိုတယ်များအဆင့် မြင့် မော်တယ်များ၊ အဆင့်မြင့်အိမ်ယာများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံစသည်တို့လည်း ရှိလာကြသည်။ သန်လျင်မြို့တွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံအပြင်၊ မြို့နယ်ဆေးခန်းများ၊(၂၄)နာရီ အထူးကုဆေးရုံ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးဓါတ်ခွဲခန်းများလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင် လူမူ ကူညီရေးအသင်းများ၊ NGO အဖွဲ့များ ၊ အခြား လူမူအဖွဲအစည်းအသင်းများ၊ ပရဟိတဂေဟာများလည်း ရှိသည်။ မြို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် မြို့နေ လူဦးရေများပြာလာမှု ၊ရောင်း/ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကုမ္မဏီရုံး ခွဲများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်း အရောင်း ပြခန်းများ၊ မြို့မဈေး နှင့် ဘုရားကြီးဈေးတို့အပြင် Super Market များလည်းဖွင့်လှစ်လာကြသည်။
သန်လျင်မြို့နယ်၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် လူနေမူထူထပ်လာ ခြင်း၊ လူနေမူ အဆင့် အတန်းမြင့်မားလာခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်စည်အရောင်းအဝယ်များ ကောင်းမွန်ပြီး အလုပ် အကိုင်အခွင့်အရေးများပိုမိုများပြားလာသည်။ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ (CNG) အရောင်း ဆိုင်များ နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်။ ယခင်ကသန်လျင် သင်္ဘောဆိပ်သည် ယခုအခါတွင် အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။
သန်လျင်မြို့သည် သမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးများ၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများ၊ ရာဇာဝင်များရှိပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သောကြောင့် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ၊ ရောင်းဝယ်မူများ နှင့် စည်ကားသည် မြို့တစ် မြို့အဖြင့်တည်ရှိပြီး နှစ်စဉ် (ဖေဖော်ဝါရီ) လရောက်တိုင်း သန်လျင်ကျိုက်ခေါက်စေတီတော်ဘုရားပွဲကိုစည်ကား သိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေ့ရှိကြပါသည်။
University of East Yangon [Tar Wa]
Co-operative University [Thanlyin]
San Taw Shin Kyaik Khauk Pagoda
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin
Than Lyin Bridge
Number Of Village Tracts 28
Population In Conventional HouseHolds 253,923 80,368
Number Of Convetional Households 61,597 18,709
•In Thanlyin Township, there are more females than males with 95 males per 100 females.
•The majority of the people in the Township live in rural areas with only (32.1%) living in urban areas.
•The population density of Thanlyin Township is 719 persons per square kilometre.
•There are 4.1 persons living in each household in Thanlyin Township. This is slightly lower than that of Union average.
Productions 69 9887
Retails 534 1579
Wholesales 106 1167
Services 528 5041
Trading29
All about Than Lyin
: U Lwin Ko Latt
: +959 731 601 17
: U Nay Lin Aung
: +959 506 7061
: U Aung Naing Htun
: +959799 451 77
: U Ye Myint Soe
: +959401 540 555
Category : Cables & Wires [Manu/Dist]
Address : B/18-1, Thilawa Special Economic Zone (B),
Phones : 09-898982460, 09-898982461, 09-898982462, 09-898982463
S.P.Petpack Inter Group [Myanmar] Co., Ltd.
Category : Bottle Caps & Seals
Address : A11-2, Thilawa Special Economic Zone (A),
Phones : 09-966892029, 09-950216407, 09-960365124
Phones : 09-898982460, 09-898982461